MABASA | Jiangsu Kaichuang International Trade Co, Ltd.
Zvese zvatinoita, kungorega vatengi vachiwana zvimwe mabhenefiti mumusika kuti vawane mikana yakawanda yebhizinesi yekugadzira yakanyanya kukosha kune vatengi vedu nenharaunda.
"Yakatemerwa vatengi", isu tinopa yakazara yakazara mhando yemhando masevhisi kune vatengi vedu.
Yemahara Mhando Yekuongorora
Ipa Samples dzekuyedza
Pindura Kuhunyanzvi Kubvunza
Kubvuma Basa Rinokumbira
Kuomerera kune "kugutsikana kwevatengi sekutarisa, kuenderera kwehunhu kuvandudzwa, kutsvaga kwehunhu hwakanaka" iwo mutemo wehutano.Simbisa kugadzirwa kwechigadzirwa uye nzira dzekutarisa.Concentrate pakuvandudza musimboti wemakwikwi emabhizinesi.Production kuongorora Mukuomerera kwazvo maererano nemhando yepamusoro yemhando. Kubudikidza neyakaomarara kutonga kweyekugadzira mutsara, yega nzira yekuzviongorora, kuongorora pamwe uye semi-apedza kuongorora, akapedza zvigadzirwa kuongororwa kuti ave nechokwadi chekuti chigadzirwa chega chega chakavimbika uye chakanakisa mhando.Win mukurumbira kubva kune vatengi uye musika, Kukurumidza kusimuka kuve iyo mutungamiri munyika yealuminium yekugadzirisa indasitiri.
Kuomesa Kwayedza, Kushanda Kwakachengeteka
Mingtai inosangana nezvinodiwa nemushandisi neakanakisa ese maitiro maitiro, kubva kualuminium ingot kutenga, kugadzira,
maitiro vimbiso yekutevera kweichi chiitiko, icho chinopa chengetedzo kune vashandisi.
Kubva kuOrder kusvika kuDelivery
Nechibvumirano chekutengesa, odhi yekutevera yekutarisa anotarisa mamodheru uye huwandu hwealuminium alloy.
Yemhando Bvunzo Usati Waendesa
Mushure mekupedza kugadzirwa kwechigadzirwa, wemuongorori wemhando yepamusoro anozotarisa mhando yeimwe batch yezvigadzirwa, tora mifananidzo uye uzvitumire kune vatengi.
Tarisa Zvinhu Paunenge Uchirongedza
Usati warongedza uye kuendesa, iyo yekuraira yekutevera mabharani anotarisa zvinhu zvakapetwa zvakare nerunyorwa rwekutakura kudzivirira kurasikirwa kwezvinhu.
Kavha Uye Kutakura
Tora kurongedza kwematanda kusimbisa iyo aluminium alloy, kudzivirira iyo oxidation yealuminium alloy, uye kuvimbisa kuendesa kwakakwana kwezvigadzirwa munzira inokurumidza, yakachengeteka uye yakavimbika.
Kubva pachirongwa ichiumba kune yevatengi saiti kuyedza, isu tinopa vatengi neakakwana sevhisi system iyo inoumba yakazara, -tatu-hukuru mhando kufukidzwa, zvichiita vatengi ruzivo rwakawanda uye rwakakwana.
Chigadzirwa kubvunza: Kugamuchira kubvunzana kwebasa mumazuva makumi matatu nemakumi matatu nemashanu pagore.
Strong technical timu: Inoshanda tekinoroji mhinduro dzakagadzirirwa iwe.
Nzira dzakasiyana dzekutiwana isu: E-mail, Tel, Skype, Facebook, Twitter, Linkedin, Online Chat ...
Sevhisi panguva yekutengesa
* Zvakanyanya intelligentproduction zvinomera.
* Kugara uchipindura kufambira mberi kwechigadzirwa.
* Kuomeserwa kwekuyedza vasati vatumirwa kune vatengi.
Yakakwira mhando uye neruzivo mutengesi maneja anokupa iwe yakasarudzika chigadzirwa mazano uye kotesheni scheme mushure mekuziva zvako zvaunoda. Mushure mekuisa odha, fekitori yemazuva ano inogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kwauri, uye kuburikidza nedhipatimendi rekutarisa, dhipatimendi rekuongorora mhando uye nezvimwe zvikamu zvekutarisa, kuona kuti mhando yechigadzirwa inosangana nezvinodiwa nenyika nemutengi zvezviratidzo.
Vanotevera-kutengesa timu yebasa inoronga hunyanzvi hwekutakura zvinhu iwe uye uteedzere maitiro ese kuti uve nechokwadi chekuchengetedza kwezvinhu zvako; kana iwe wakadzokorora zvekutenga zvinodiwa, iyo yekumashure-yekutengesa sevhisi timu inoronga yenguva dzose stock iwe; kana iwe uine mibvunzo nezvehunhu hwechigadzirwa, iyo mushure-yekutengesa sevhisi timu inokupa mhinduro kwauri nekukurumidza sezvazvinogona.
Kaichuang aluminium inokupa iwe izere maitiro, yakasanganiswa uye yekudyira sevhisi. Kurongeka kwese, kubva pre-kutengesa kubvunzana kusvika mushure mekutengesa kuendesa, isu tiri nenguva yekutevera kuona kuti vatengi vanogona kugamuchira zvinhu zvakachengeteka, sevashandi vebasa, vepedyo, vakavimbika zvakanyanya.Tinogamuchira vatengi kuti vashanyire fekitori yedu. Uye isu tinogona kupa iyo yemahara yemahara. Mukugadzirwa kwechigadzirwa, isu tinoronga kuyedza kwekugadzira zvinoenderana nematanho epasi rose. Kuburikidza nekutarisisa kwakasimba kweiyo yekugadzira tambo yega nzira yekuzviongorora-kuongorora, kuenzanirana cheki uye semi-apedza kuongorora, akapedza zvigadzirwa kuongororwa, Isu tinoona kuti chidimbu chese chedu zvigadzirwa zvakavimbika. Kusangana pasvondo rega rega, kuti uwane matambudziko, uagadzirise kuitira basa riri nani. Kana mahwendefa ealuminium ane chero matambudziko ehunhu, isu tichaedza nepatinogona napo kugadzirisa izvozvo.
aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo, Yakachipa Aluminium Sheets, aluminium alloy 6061 mutengo, Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, Tsika Plate Aluminium Sheets, 7050 aluminium pepa,